Ukuhlelwa kwengadi kufanele kwenziwe ngokunakekelwa okukhulu. Kodwa-ke, noma umsebenzisi engenayo ingadi enkulu anayo, kodwa ingadi encane nje, noma i-balcony noma ithala, nayo ingadala ucezu lwendawo eluhlaza. Isisekelo sayo siyobe sesikhona amabhodwe engadiukukhethwa kwakho kukhulu.
Yikuphi amabhodwe engadini okufanele akhethwe, kucatshangelwa okubalulekile noma ngosayizi wabo?
Bheka futhi: Ukwakhiwa kwamadolobha amancane
Izinhlobo zamabhodwe engadi
Amabhodwe engadi atholakala ebangeni lokukhetha kakhulu. Ziyahluka ngesimo, usayizi nezinto ezibonakalayo, ngakho-ke konke kuncike emcabangweni wokuhlelwa kwesikhala. Uma amabhodwe ehlukaniswe ngokuhambisana nezinto zawo, kuyabhekwa okulandelayo:
Amabhodwe engadi okhuni
Amabhodwe engadi okhuni - njengoba waziwa kahle, izinkuni ziyinto yemvelo, ngenxa yokuthi izimbiza zensimu zamapulangwe zizongena kunoma iyiphi ingadi noma ithala ngaphandle kokuhlukile. Ngemuva kwakho konke, futhi kuyisitayela esijabulisayo kanye nokusebenza okuhlukahlukene. Kungakho amabhodwe engadi yokhuni ezogcwalisa ngokuphelele isikhala ngamabhentshi okhuni, e-rattan noma e-techno-rattan nezihlalo zabakhubazekile, futhi angene esikhaleni esingaphansi kakhulu kweklasikhi.
Izimbiza zekhonkrithi - Izimbiza zokhonkolo zensimu zivame ukusetshenziswa ezikhaleni zomphakathi. Kodwa-ke, zingabekwa nasezingadini zasekhaya, kumakhalkini nasezandeni. Okubalulekile, kusukela endaweni yokubuka yokusetshenziswa, amabhodwe ekhonkrithi engadini akhonkolo, ngakho ngakolunye uhlangothi amelana nomoya oshubile, ngakolunye uhlangothi kunzima ukuhambisa. Uma lezi kuyizikhala ezincanyana, zinganqoba ngokubonakala kwazo. Lapho-ke kufanelekile ukutshala imali ezimbizeni zokhonkolo zensimu enezimo ezilinganiselwe, noma amabhodwe alingisa ukhonkolo kuphela.
Amabhodwe epulasitiki engadini
Amabhodwe epulasitiki engadini - lolu hlobo lwamabhodwe lubonakala kakhulu ngentengo ephansi. Ngaphezu kwalokho, kuluhlu olukhulu lwemikhiqizo (kufaka phakathi izimbiza ezinkulu nezincane zepulasitiki engadini, amabhodwe engadi aphakeme nalawo aphezulu, amabhodwe engadi yanamuhla futhi akudala Imvamisa zikhanya ngakho-ke kulula ukuthwala. Ngakolunye uhlangothi, zingqongqozwa kalula yimizwa yomoya, ngakho-ke - izimbiza ezinkulu zepulasitiki - kufanelekile ukwengeza isisindo esengeziwe. Umgodi ongaphansi kwembiza yepulasitiki nawo uzoba wusizo, ozoqinisekisa ukuhanjiswa kahle kwesitshalo esitshalwe kuso.
Izimbiza ze-Ceramic engadini
Izimbiza ze-Ceramic engadini - Ngokungangabazeki, amabhodwe engadi ye-ceramic (amakhulu namancanyana) angenye yamabhodwe asetshenziswa njalo, ngoba ayindlela yohlobo yokuthakazelisa. Kulula ukuhambisa futhi ngaphezu kwalokho bayamelana nezimo zezulu. Okubaluleke kakhulu, maqondana nokunakekelwa kwezitshalo, ziqinisekisa ukuhamba kahle komoya. Ngeshwa, amabhodwe engadi ye-ceramic awahlali isikhathi eside futhi kulula ukuwaphula, ngokwesibonelo lapho uhamba noma uthwele.
Izimbiza zensimu yamatshe
Izimbiza zensimu yamatshe - inhle kakhulu futhi ikhethekile, kepha ngasikhathi sinye izimbiza ezibizayo zensimu, zivame ukusetshenziswa ezindaweni zomphakathi (isb. emathuneni). Izinto zezimbiza zamatshe zingaba ngegranite noma zemabula.
Izimbiza zensimbi yensimbi
Izimbiza zensimbi yensimbi - Izimbiza zensimbi imvamisa ziyimikhiqizo emincane kakhulu, zivame ukusebenzisa insimbi ye-aluminium noma yensimbi, evikela ukuzivikela. Ngaphezu kwalokho, zingamabhodwe engadi evimbela iqhwa ezingashiywa ngaphandle unyaka wonke. Kufanele ziphathwe njengezimbiza zanamuhla zensimu.
Izimbiza zeTekhorattan noma ze-rattan
Izimbiza zeTekhorattan noma ze-rattan - Izimbiza ezinhle kakhulu zezimbali zokuhlobisa izingadi, ama-balcony, amathala kanye nama-gazebos kwisitayela sanamuhla. Banikela ngokukhethwa okubanzi ngokuya ngesimo nobukhulu, okungasebenza njengesembozo sebhodwe elilungile lezinto ezihlukile. Umehluko phakathi kwe-rattan ne-polytantan, phakathi kwezinye izinto, ukumelana nomswakama nemisebe yelanga. Vele, i-poly rattan ibukeka kangcono kulokhu.
Noma mhlawumbe amabhodwe okuhlobisa wedolobha?
Ukukhethwa kwamabhodwe okwenziwa izingadi kukhulu, ikakhulukazi ngoba kwezinye izingadi ongabheja ngazo okwangempela, kokunye amabhodwe edolobha. Kulokhu, lezi ngokuvamile izimbiza ezinobukhulu obukhulu noma okungenani obuphakathi, ngakho-ke zizosebenza kahle ezikhaleni ezinkulu, yize kungeyona umthetho. Izimbiza zezimbali zedolobha ezikhethwe kahle zizoyihlobisa ingadi futhi ingeze umbala kuyo.
Njengomthetho, kuyindlela yendabuko, ne-minimalist, ngenxa yokuthi kuzohambisana ngokuphelele nokuhlelwa kwengadi, ikakhulukazi ngesitayela sanamuhla. Ngaphezu kwalokho, ngakolunye uhlangothi, amabhodwe okuhlobisa, ngakolunye uhlangothi, ayasebenza ngemisebenzi eyengeziwe:
izimbiza zezimbali ezikhazimulayo.
Ngale ndlela, bahlanganisa ama-aesthetics nomsebenzi osebenzayo. Imbiza izosebenza njengendawo yezimbali, izihlahlana noma izihlahla ezincane, kanye netafula, isihlalo, noma ngemuva kokuhwalala kuzophawula izindlela zokuxhumana engadini.
Imaphi amabhodwe engadi okufanele uwakhethe?
Ngakho-ke kubonakala ngokusobala ukuthi kunokhetho olukhulu kakhulu lwamabhodwe engadi emakethe, ngakho-ke wonke umuntu kufanele athole okuthile okulungile engadini yabo, kuvulandi noma ithala. Konke kuncike ekuhlelweni kwesikhala, isibonelo kwisitayela sendabuko, sanamuhla noma i-avant-garde. Abanye bazokhetha amabhodwe enkuni, abanye bazokhetha izimbiza zensimbi noma zamatshe. Kunconywa amabhodwe amancane kuvulandi, kodwa amabhodwe amakhulu engadi azoba alungele ithala elikhudlwana. Futhi qaphela lokho ngamunye amabhodwe angahlotshiswa ngokukhululekile, isibonelo ngemisebenzi yezandla ejwayelekile, yokubhula, futhi nokudwetshwa.
Kwabaningi, intengo ngokuqinisekile futhi iyinqubo yokukhetha. Lokhu akusho, noma kunjalo, ukuthi kufanele ubheje ngamabhodwe engadi ashibhile. Thengisa (isb. Kuvuliwe Idizayini Yefomu Ledolobha) yithuba elihle lokuthenga izimbiza ezinhle ezenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ngamanani akhanga. Ngale ndlela ungonga kakhulu, ngokuthenga okushibhile amabhodwe engadi lwenziwe ngokhonkolo, ngisho nezimbiza zamatshe ezikhethekile.
Enye indlela yokukhetha izitshalo umsebenzisi afuna ukuzitshala endaweni eluhlaza engadini yakhe, ithala noma ihalcony. Akudingeki ngaso sonke isikhathi ukuthi kube ngamabhodwe amakhulu engadi. Kancane, Izimbiza ezilengayo zizosebenza kahle ngezitshalo ezikhuphukayo kanye nama-rhizomes. Kakhulu kungatshalwa ngisho izihlahlana nezihlahla ezincanenasezimbizeni ezikhulu zonke izinhlobo Amakhambi.
izimbiza zikakhonkoloizimbiza zikakhonkoloamabhodwe engadi yokhuniamabhodwe edolobhaizimbiza zedolobha lomenziamabhodwe engadiamabhodwe ekhonkolo engadiniizimbiza ze-ceramic engadiniamabhodwe amakhulu engadi yobumbaamabhodwe engadi yokhuniamabhodwe amakhulu engadiamabhodwe engadi yamatsheIzimbiza zensimbi yensimbiamabhodwe engadi aqandelwa yiqhwaamabhodwe engadi yanamuhlaamabhodwe engadi epulasitikiamabhodwe amakhulu engadi epulasitikiukuthengiswa kwamabhodwe engadiniizimbiza zikakhonkoloIzimbiza zeRattanIzimbiza zeTekhorattanamabhodwe engadi yokhuniamabhodwe amakhulu engadiizimbiza zezimbali ezikhethekileamabhodwe engadi yanamuhlaamabhodwe amade engadi